Soo ifbaxa MSO-yada Koritaanka Warshadaha Xashiishada • Daawooyinka Inc.eu
Bogga ugu weyn Saamiyada & Dhaqaalaha Soo ifbaxa MSO-yada Koritaanka Warshadaha Xashiishada
Soo ifbaxa MSO-yada Koritaanka Warshadaha Xashiishada
albaabka Ties Inc. March 5 2022
maqaal by Ties Inc. March 5 2022
Wershadaha xashiishka ayaa sii weynaanaya oo sii qaangaaraya. In ka badan iyo in ka badan oo ka mid ah hawl wadeennada dawlad-goboleedka badan (MSO) ayaa ka soo baxaya Ameerika, shirkad ka hawlgasha dhawr gobol.
Marka ay dadku ka hadlaan MSO-yada, badanaa kama hadlaan silsilad yar, oo madaxbannaan oo ku dhacda in ka badan hal gobol. Hase yeeshe, waxay tixraacaan shirkadaha waaweyn, liiska ku jira ee firfircoon ee tafaariiqda, beerashada iyo/ama soosaarka.
Warshadaha xashiishka ee dadka waaweyn #MSOgang
Marka la sameeyo hawlgallo iyo summooyin tiro suuqyo ah oo dalka oo dhan ah, MSOs waxay rajaynaysaa inay faa'iido helaan marka xashiishka la sharciyeeyo heerka federaalka. Joogitaankooda heer qaran ayaa u ogolaanaya inay si degdeg ah uga jawaabaan suuqyada soo koraya.
Kor u kaca shirkadahan si guud looga ganacsado ayaa horseeday hashtag #MSOgang ee baraha bulshada, halkaas oo maalgashadayaasha tafaariiqda iyo male-awaalayaashu ay ku dhiirigeliyaan faraska ay ugu jecel yihiin marijuana tartanka saamiyada. La yaab ma leh, xeeladaha ganacsi ee MSOs si sax ah uma kasbado dad badan. Shirkado badan oo waaweyn ayaa si firfircoon ugu ololeeya dawladaha si ay u abuuraan caqabado badan intii suurtagal ah hawl wadeenada maxaliga ah iyo kuwa kale ee la tartami kara. Tani waxay la kulantay iska caabin ka yimid ganacsatada yar yar ee xashiishadda. Ka weyn mar walba ma roona. Shirkadaha leh booska keli-taliska ah wax faa'iido ah uma yeelan doonaan suuqa.
Qaar badan oo ka mid ah MSOs ayaa diiradda saaraya alaabooyinka la soo saaray mana xiiseeyaan in ay koraan ubaxyo xashiishad oo tayo sare leh. Haddana waxaa jira wiilal waaweyn oo diiradda saaraya xashiishadda tayada leh.
Akhri wax dheeraad ah eu.worcestermag.com (Source, EN)
saamiyadakaydka xashiishkamaaliyad ahaansharciyeyntaMaraykanka
Sideed uga faa'iidaysan kartaa xashiishka caafimaad ahaan?
Goorma ayaa taxanaha daroogada Griselda lagu sii dayn doonaa Netflix?
Waxaa soo baxday in xashiishadda cannabis ay rabto…
Cannabis ma kuu cuntaa? Isku day hadda